कोरोना म,हा,मा,रीले देश अस्तव्यस्त बनेको बेला ओली सरकारले गर्यो फेरी जनता रुवाउने यस्तो निर्णय – " सुलभ खबर "
कोरोना म,हा,मा,रीले देश अस्तव्यस्त बनेको बेला ओली सरकारले गर्यो फेरी जनता रुवाउने यस्तो निर्णय
काठमाडौं । देश कोरोना म,हा,मा,रीले अस्तव्यस्त बनेका बेला यता ओली सरकारले भने जनता मारमा पर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छपेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य बढेको हो । मंगलबार निगमले गरेको निर्णय अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ।
अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य लिटरको १०१ रुपैयाँ र डिजेलको ८७ रुपैयाँ पुगेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४.७७ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ५.८० रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६.०६ रुपैयाँ मूल्य बढाएर सूची पठाएपछि मूलय बढाइएको निगमले जनाएको छ । एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य यथावत राखिएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा माग गरेका छन् ।
ओलीले आइतबार भारत र नेपालकै नेताहरूले मिलेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए । यसलाई लिएर नेकपाकै नेताहरूले ओलीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेकपाका एक नेताले भने- ‘पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि उहाँले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत गुमाउनुभयो । अब मार्ग प्रशस्त गर्नुस् भनेर वरिष्ठ नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको छ ।’ अरू स्थायी कमिटी सदस्यले पनि त्यही धारणा राखेको उनले बताए ।
बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकको सुरुमा पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डले विषय प्रवेश गराएका थिए भने ओलीले जवाफ दिएका थिए । तर प्रचण्ड र ओलीले के-के भनेका थिए भन्ने उनले खुलाएनन् ।
एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । सरकारको कामको फेहरिस्त सुनाएका उनले असन्तुष्टि तथा कुण्ठा पालेका तथा पद नपाएकाले मात्र सरकारको काम नदेखेको बताएका थिए।
आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेका थिए ? हेर्नुहोस जस्ताको त्यस्तै:
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लैनचाैरस्थित भारतीय दूतावास सक्रिय भएकै हो भने आफूलाई आँटिलो राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण मात्रै ठोकेर दायित्व पूरा हुँदैन । सरकार ढाल्न सक्रिय हुने राजदूतलाई तुरुन्त सिंहदरबारमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ र स्पष्टीकरण सोधेर मात्र पुग्दैन । तल्कालै, २४ घण्टाभित्र नेपाल छाड्न आदेश दिनुपर्छ भन्नेसम्मका टिप्पणीहरु सुरु भएका छन्।
उसो त नेकपा सचिवालयबाट टरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट स्थायी कमिटीमा सरेको छ । दुई दिन स्थगित भएर मंगलबारदेखि पुनः शुरु हुने बैठकमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवै मोर्चामा असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेको पनि बताइएको छ ।
कार्यसूचीमा रहेको सरकार र पार्टीको कामको समीक्षामा प्रवेश गरेपछि स्थायी कमिटीको बहुमतले ओलीलाई पद त्याग्न दवाब दिने संकेत नेताहरुले गरेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेपछि स्थायी कमिटीमा अर्का अध्यक्ष ओली अल्पमतमा छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार सरकारको कामको समिक्षा हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट हट्न र पार्टी कामको समीक्षा हुँदा अध्यक्षबाट हट्न ओलीलाई दबाव दिने तयारी अर्को पक्षको छ ।यसअघि सचिवालय बैठकबाटै ओलीलाई हटाउने प्रयास भएको थियो ।
तर, अन्तिम घडीमा वामदेव गौतमले ओलीलाई साथ दिएका कारण प्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव सम्भव भएको थिएन । त्यसबेला दुवै पक्षले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन सांसदहरुको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका थिए ।
तर, सचिवालय र संसदीय दलमा दुवै पक्षले बहुमत जुटाउन नसकेकै कारण त्यसबेला ओली हटाउने प्रयास असफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो परिघटनालाई ‘पार्टी फुटाउने बहुमतीय खेल’ को संज्ञा दिएका छन् । भने ओलीइत्तर पक्षले हसताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले फार्टी फुटाउन खोजेको प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन् ।अब जारी स्थायी कमिटी बैठकले नेकपाभित्रको अन्तरविरोध कसरी समाधान गर्ला ? अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्न । तर, दुबै समूहका
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा एक्शनमा आयो सरकार
काठमाडौं । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच हजार मानिसको कोभिड–१९ को
भारतीय टेलिभिजनको प्रसारण बन्द भएपछि ओली सरकारले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति
काठमाडौं । विदेशी च्यानल वितरण मल्टिसिष्टम अपरेटर एमएसओले भारतीय टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गरिदिएपछि ओली सरकारले
पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटस्थित गोठादीमा टङ्कबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिँदा निधन हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ
काठमाडौँ । कोरोनाका का,र,ण ओमनमा समस्यामा परेका थप १७९ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । दूतावासको
काठमाडौंमा शुक्रवार सं,क्र,मि,त,को डाटा, यस्तो छ अवस्था
काठमाडौं, २६ असार । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।